Preorder Sales Rep. (လှည်းကူး၊ ထောက်ကြံ့) at I.P. One (Myanmar) Company Limited | MyJobs
/ Preorder Sales Rep. (လှည်းကူး၊ ထောက်ကြံ့)
Preorder Sales Rep. (လှည်းကူး၊ ထောက်ကြံ့)
Duties & responsibilities (တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ)
- အလားအလာကောင်းများ၊ customer/ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် သတ်မှတ်ပေးထားသော အရောင်းမြို့နယ်/နယ်မြေများအတွင်း (လှည်းကူး၊ ထောက်ကြံ့ မြို့နယ်များ) ဆိုင်ကယ်မောင်း၍ သွားလာဆောင်ရွက်ရန်။
- ရောင်းအားတိုးတက်စေရန်နှင့် target ပြည့်မှီ/ကျော်လွန်စေရန် customer အသစ်ရှာဖွေခြင်း၊ ရောင်းအားမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် SKU အသစ်များတိုးချဲ့ရောင်းချခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
- Customer များအား လုပ်ငန်းမူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် Promotion အစီအစဉ်များကို ထိရောက်ရှင်းလင်းစွာ သိရှိစေရန် အသိပေးဆောင်ရွက်ရန်။
- မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် customer များနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
- ပရီအော်ဒါကောက်ခံခြင်း နှင့် PO မှာခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားလုံးကို ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြန့်ချီရေး/ပို့ဆောင်ရေးပါတနာတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်။
- ကုမ္ပဏီ Product အရောင်းနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုသည် Customer များ၏ ငွေကြေးကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းအပေါ် အကျိုးပြုပုံများကို အသိပညာပေးရန်။
- အပြိုင် product များ၊ product အသစ်များ၊ စျေးကွက်အခြေအနေများနှင့် customer လိုအပ်ချက်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာတင်ပြရန်။
- Marketing ဌာနနှင့်ပူပေါင်း၍ Branding ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်။
Job Requirements (အလုပ်လိုအပ်ချက်များ)
- Must be able to use own or self-arranged motorbike (Additional motorbike usage and maintenance benefits will be specified and given monthly)
· ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် (သို့မဟုတ်) ဆိုင်ကယ်ကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရမည် (ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုမှုခံစားခွင့်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခံစားခွင့်များ လစဉ်သတ်မှတ်၍ ထပ်လောင်းပေးပါမည်)
- လှည်းကူး၊ ထောက်ကြံ့မြို့နယ်တစ်ခုခုတွင် အခြေချနေထိုင်သူများနှင့် ပိုသင့်တော်သည်
- Familiar or quick learning skills of territory’s roads, streets, retails shops, routing plans, etc..
· သတ်မှတ်ဒေသတွင်းရှိ လမ်းများ၊ ဆိုင်နေရာများ၊ လမ်းကြောင်းရေးဆွဲမှုများ တို့ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရမည် (သို့) လျင်မြန်စွာသင်ယူနိုင်ရမည်။
- FMCG / လူသုံးကုန်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတွင်အရောင်းအတွေ့အကြုံရှိဖူးသူ အခွင့်အရေးသာမည်။
- Able to travel with motorbike as much as required within assigned region as well as visit Yangon office monthly.
· သတ်မှတ်ထားသောမြို့နယ်အတွင်းလိုအပ်သလို ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားလာနိုင်သလိုလစဉ်ရန်ကုန်ရုံးခန်းသို့လည်း ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။
- Monthly Sales Incentive (လစဉ် အရောင်းပြည့်မီမှု အပိုခံစားခွင့်)
- Monthly Mobile Top-Up Allowance (လစဉ် သတ်မှတ်ဖုန်းဘေ ခံစားခွင့်)
- Monthly Motorbike & Gasoline Fixed Allowance (လစဉ် ဆိုင်ကယ်နှင့်ဆီ အသုံးပြုမှု သတ်မှတ်ပြီးစရိတ် ခံစားခွင့်)
- Annual Bonus depending on the performance (လုပ်ရည်ကိုင်ရည် စံချိန်ပြည့်မီအပေါ်မူတည်၍ရသော နှစ်စဉ် အပိုဆုကြေး)
I saw this job posted on https://www.myjobs.com.mm/job/854979 and thought you might be interested in it.